IMDB: 6.6/10 1,844 votes
Hidden Figures The untold story of Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan and Mary Jackson – brilliant African-American women working at NASA and serving as the brains behind one of the greatest operations in history – the launch of astronaut John Glenn into orbit. The visionary trio crossed all gender and race lines to inspire generations to dream big. (ဒေါ်ရသီဗန်း မယ်ရီဂျက်ဆန် နဲ့ ကတ်သရင်းဂျွန်ဆန်) အော်စကာ သုံးဆု ...
IMDB: 7.8/10 104,352 votes
Manjhi: The Mountain Man (2015) (အချစ်အတွက် တောင်တစ်လုံးအား တစ်ယောက်ထဲဖြိုခဲ့သူ သို့မဟုတ်/ ဂင်းနစ်စံချိန်ဝင် ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်လူသား) ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချစ်ကိုနည်းအမျိူးမျိုးပုံဖော်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူ အတွက် ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်.. စွန့်လွတ်အနစ်နာခံ ရဲတယ်… တစ်ချို့က ကိုယ့်ချစ်သူအတွက်အိမ်လေးတစ်လုံး ဆောက်ပေးတာ… တစ်ချို့က ကိုယ့်ချစ်သူအတွက် ရွှေငွေရတနာတွေ အပြည့်နဲ့ ကိုယ့်ချစ်ရတဲ့သူ စိတ်ချမ်းသာအောင်ဖန်တီးပေးကြတာ ….. စတဲ့ စတဲ့ လက်တွေ့ဆန်တဲ့ အချစ်မျိုးနဲ့လည်း ပုံဖော်ကြတာပါပဲ။ ဆိုတော့ကာ… အချစ်အတွက်နဲ့ တောင်တစ်လုံးအား တစ်ယောက်ထဲဖြိုခဲ့တဲ့သူရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်ကပြောရင်… ခင်ဗျားတို့ ယုံကြည်မှာလား လက်ခံမှာလားး??? လက်ခံလိုက်ပါ မိတ်ဆွေ.. ???? အဲ့လူဟာ တကယ်ကိုပဲ တောင်တစ်လုံးလုံးကို တစ်ယောက်ထဲ ဖြိုခဲ့လို့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာရော …ကမ္ဘာ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာပါ..သူ့ကိုအံသြစွာနဲ့လက်ခံခဲ့ကြရပါတယ်.. နောက်ဆုံး သူဟာ ကမ္ဘာ့ဂင်းနစ်စံချိန်မှာ အံ့ဖွယ်လူသားအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိုလည်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့လူကတော့ တခြားသူ မဟုတ်ပါဘူး။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘီယာပြည်နယ်ထဲက ရွာလေးတစ်ရွာမှာ နေထိုင်တဲ့ Dasharth Manjhi ဆိုတဲ့ သူပါပဲ။ အခု ကျွန်တော်ညွှန်းချင်တဲ့ ဇာတ်ကားကတော့ Manjhi အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ရုပ်ရှင်ပါ။ ဒီရုပ်ရှင်ကို ရိုက်ကူးဖို့ ...
Mummies: Secrets of the Pharaohs (2007) အီဂျစ် ပြည်လို့ ပြောလိုက်တာ နဲ့ လူတိုင်း အရင်ဆုံး ပြေးမြင်မိမှာက ပိရမစ်တွေနဲ့ မံမီတွေပါပဲ။ ရုပ်ရှင်တွေ စာအုပ်တွေ ပန်ချီကားတွေ ကဗျာတွေမှာလဲ ပိရမစ်တွေ မံမီတွေ အကြောင်းကိုအမျိုးမျိုးရေးသားဖော်ပြကျပါတယ် ။ခေတ်သစ် ကမ္ဘာကြီးက လျှင်မြန်စွာ နည်းပညာသစ်တွေ တိုးတက် လာနေပြီ ဖြစ်သလို အဲ့နည်း ပညာ တွေရဲ့ အကူအညီတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အဖြေရှာမရခဲ့တဲ့ မံမီတွေ အကြောင်း ထူးခြားဆန်းကျယ်မှု့တွေကိုလေ့လာနိုင်လာပါပြီ။ ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်လေးကလည်း ဖာရို တွေရဲ့ မံမီတွေ ဆီကနေရတဲ့ ဒီအန်အေတွေကို စုစည်းလေ့လာခြင်းဖြင့် သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ တွေကို လေ့လာနိုင်ကြောင်း အဲ့လေ့လာ မှု့တွေက နေတစ်ဆင့် သေနှုန်းမြင့်တဲ့ရောဂါတွေအတွက် ကုသရာ နည်းလမ်းတွေကို ဘယ်လိုရှာဖွေနိုင်ကြောင်းပြသထားတာပါ။ ရှေးခေတ်အီဂျစ်မှာ ဦးခေါင်းခွံ ခွဲစိတ် ကုသမှု့ တွေတောင် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ပညာရှင်တွေက တွေ့ရှိထားဖူးပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီဖာရို တွေဆီမှာ ခေတ်သစ်လူသားတွေထက်ကို ရှေ့ရောက်နေတဲ့ ...
IMDB: 6.6/10 2,342 votes
Hands of Stone (2016) Movie Review IMDb 6.6 ရထားတဲ့ "Hand of Stone - သံမဏိလက်သီး" ကားလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ဒီကားလေးက လက်ဝှေ့ကားတကားဖြစ်ပြီး ပနားမားလူမျိုးလက်ဝှေ့ချန်ပီယံတယောက်ရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ငယ်စဉ်ထဲကလက်ဝှေ့ဝါသနာအထုံပါပြီး ဘ၀ကိုဆင်းရဲစွာဖြတ်သန်းလာရတဲ့ ရော်ဘတ်တိုဒူရမ်ဟာ လက်ဝှေ့နည်းပညာမှာ စနစ်တကျသင်ဖို့ ၇၂နှစ်အရွယ် ရေးအာဆယ်ဆိုတဲ့ လက်ဝှေ့နည်းပြလောကမှ အနားယူထားတဲ့ လူတယောက်ကို အကူအညီတောင်းခဲ့တယ် ရော်ဘတ်တိုဒူရမ်တဖြည်းဖြည်းအောင်မြင်ပြီး နေရာတနေရာရလာပြီးနောက် သူ့ရဲ့ ပြင်မရတဲ့ ရိုင်းစိုင်းတဲ့စိတ်၊ မာနကြီးတဲ့စိတ်ကြောင့် ဘ၀တဆစ်ချိုးပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက် ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ? ဘယ်လိုအတိုက်အခိုက်တွေနဲ့ ကြုံရမလဲ? အောင်မြင်မှုပြန်ရဖို့ ဘယ်လိုတွေကြိုးစားရမလဲ? စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတရစေမဲ့ကားမို့ ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်ဖို့ ညွှန်းရင်း ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ ဇာတ်ကားထဲမှာပဲ ဆက်ကြည့်လိုက်ကြပါဦး (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ.ဘာသာပြန်သူကတော့ Sofy ပဲ ဖြစ်ပါတယ်) File Size : 800 MB / 400 MB Quality : Bluray 720P Running Time : 1hr 51minutes Format : Mp4 Genre : Action, Biography, Drama Translator : Sofy Encoder ...
IMDB: 6.6/10 9075 votes
Hawking (2004) စကြဝဠာကြီးမှာအစဖြစ်စဉ်ရှိတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား Big Bang ဆိုတဲ့ပေါက်ကွဲမှုကြီးအပြီးမှာ စကြဝဠာကြီးကဘယ်လိုစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာလဲ ကြယ်တွေကြွေကျတဲ့အခါ စကြဝဠာထဲမှာ ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်သလဲ အစရှိတဲ့သင်မသိသေးတဲ့ စကြဝဠာကြီးရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အဖြစ်အပျက်တွေကို အသက် 21နှစ်သာရှိသေးတဲ့ သွပ်ချာပါဒအကြောသေရောဂါသည် စတီဖင်ဟော့ကင်းဆိုသူ စကြဝဠာဗေဒပညာရှင်လေးက သီအိုရီပေါင်းများစွာထုတ်ထားခဲ့ပါတယ် နယူတန်တို့ အိုင်းစတိုင်းတို့နောက်ပိုင်းခေတ်မှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ စကြဝဠာဗေဒပညာရှင်လေး စတီဖင်ဟော့ကင်းရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်နဲ့ ဘဝကိုသူဘယ်လိုရုန်းကန်ခဲ့ရလဲဆိုတာတွေကို Hawking ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်လေးထဲမှာ ရှုစားနိုင်ပါတယ် ဒီကားလေးကိုကြည့်ပြီးလို့ သီအိုရီတွေတစ်ခုမှနားမလည်ရင်တောင်မှ ဘဝကိုဘယ်လိုအခြေအနေပဲရောက်ရောက် အရှုံးမပေးဘဲကြိုးစားချင်တဲ့စိတ်လေးတော့ပေါ်လာမှာသေချာပါတယ် ဇာတ်လမ်းကအတော်အေးပြီး သီအိုရီတွေအတွေးအခေါ်တွေနဲ့ပဲတစ်ကားလုံး ဆွဲခေါ်သွားမှာဖြစ်လို့ ဖီးလ်သမားတွေအတွက်ပိုအဆင်ပြေမဲ့ကားမျိုးပါ မင်းသားကကျနော်အကြိုက်ဆုံး Sherlock မင်းသား Benedict Cumberbatch ဆိုတော့ ပြောရရင်မင်းသားထိုင်ကြည့်ရတာနဲ့တန်နေတာ ငိငိ 2014 မှာထွက်ခဲ့တဲ့ Eddie Redmayne ရဲ့ The Theory of Everything နဲ့ဇာတ်လမ်းကျောရိုးတူပေမဲ့ Hawking မှာတော့ သီအိုရီပိုင်းကိုပိုဦးစားပေးထားတာတွေ့ရမှာပါ ကျန်တာတော့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီးဆက်ဝေဖန်ကြပေါ့ဗျာ အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ Zon Myat Noe Swe ဖြစ်ပါတယ် File Size : 700 MB/300MB Quality : Bluray 720P Running Time : 1hr 30minutes Format : ...
IMDB: 7.6/10 4529 votes
Public Enemies (2009) Public Enemies (2009) ဇာတ်ကားဟာ 1993 ခုနှစ်က နာမည်ကျော် ဘဏ်ဓားပြတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ John Dillinger အကြောင်းကို ဖြစ်ရပ်မှန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသားကြီး Johnny Depp အဓိကပါဝင်ရိုက်ကူးထားပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော အက်ရှင် Crime ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး IMDB rating 7.0 ရရှိထားသော ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ File Size : 850 MB/400MB Quality : Bluray 720P Running Time : 2hr 20minutes Format : Mp4 Genre : Biography, Crime, Drama Fixed & Synced : Wai Linn Kyaw Encoder :Thanhtike Zaw Download From Yoteshin link Download Here Bluray 720p (850 MB) Openload Link Download Small ...
IMDB: 7.0/10 240,268 votes